गुल्मीका उम्मेदवारले चुनावमा कति खर्च गरे ? – www.janabato.com
गुल्मीका उम्मेदवारले चुनावमा कति खर्च गरे ?
९ माघ २०७४, मंगलवार ०७:०६ January 23, 2018 Janabato Online
जनबाटो संवाददाता । माघ–९, संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले लाखौं रुपैया खर्च गरेका छन् । पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जितेको भन्दै संसदीय दलका उम्मेदवारहरुको सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला गुल्मीमा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगलाई खर्च विवरण बुझाएका छन् । चुनावमा देखिएको तडकभडक र भड्किलो प्रचार प्रसारको दृश्य हेर्दा निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको खर्च विवरणप्रति जनताको विश्वास नभएपनि आयोगले उम्मेदवारहरुको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
गुल्मीका २ प्रतिनिधिसभा र ४ प्रदेशसभामा उम्मेद्धारी दिएका कुल ५२ जनामध्ये ४२ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । विजयी उमेदवारमध्ये प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेद्धार गोकर्ण विष्टले धेरै खर्च गरेको पाइएको छ । विष्टले २२ लाख ७४ हजार खर्च गरेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ का विजय उमेदवार प्रदिप ज्ञवालीले १८ लाख १ सय ७० खर्च गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ विजयी उमेदवारमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश १ का सुदर्शन बरालले खर्च गरेका छन् । बरालले १४ लाख ९२ हजार २ सय ६६ खर्च गरेका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश २ का सासंद कमलराज श्रेष्ठले ८ लाख ९२ हजार २ सय ८० खर्च गरेको पाइएको छ । क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश १ का सासंद खड्ग केसीले १४ लाख ४० हजार र प्रदेश २ का सासंद दिनेश पन्थीले १४ लाख १६ हजार ३ सय ७६ खर्च गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ । गुल्मीका २ प्रतिनिधिसभा र ४ प्रदेशसभा सबैमा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धनले जित हात पारको थियो ।
काँग्रेसका भण्डारी र पहराई भए धेरै खर्चालु
निर्वाचनमा सबै स्थानमा नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिद्धन्द्धी रहेको थियो । काँग्रेससबाट प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेद्धार चन्द्र भण्डारीले गरेका छन् । भण्डारीले कुल २४ लाख २५ हजार खर्च गरेको विवरण निर्वाचन कार्यलयमा पेश गरेका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेद्धार चन्द्र केसीले २४ लाख १७ हजार ५ सय खर्च गरेको पाइएको छ । प्रदेशसभामा उम्मेद्धार बनेकामध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश २ का छन्दबहादुर पहाराईले गरेका छन् । पहराईले खर्च गर्न पाउने कुल रकम १५ लाख सबै नै खर्च गरेको विवरण पेश गरेका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश १ का उम्मेद्धार पृथ बहादुर फौजदारले १४ लाख ८३ हजार १ सय र प्रदेश २ का उम्मेद्धार धनेन्द्र कर्कीले १४ लाख ७६ हजार ८ सय खर्च गरेको पाइएको छ । भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदश १ का उम्मेद्धार शालिकराम पन्थीले १४ लाख ७५ हजार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
← सडक दुर्घटनामा ८ वर्षमा १६ हजारको मृत्यु
भलिबलका उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षक सम्मानित →
राज्यका तीनवटै तहले आमसञ्चारमैत्री कानुन बनाउनुपर्छ : आचार्य
२२ पुष २०७४, शनिबार १३:२७ Janabato Online Comments Off on राज्यका तीनवटै तहले आमसञ्चारमैत्री कानुन बनाउनुपर्छ : आचार्य